သတင်းများ - Zhongshan Biaoqi Houseware Co. , Ltd
How to choose shoe polish? Nowadays, people’s living standards and quality are gradually improving, and the wearing aspect is also greatly improved. There are more and more people wearing leather shoes. Buying shoe polish has become the biggest worry for the majority of leather shoe lovers. Then how to buy shoe polish? ဘယ်လိုဖိနပ်အရောင်ကောင်းလဲ? But when choosing shoe polish, you must first understand what leather shoes are made of. ယေဘူယျအားဖြင့်, leather materials are divided into the following categories: Smooth cowhide and ebony cowhide: It is best to use colorless high-grade shoe milk for surface maintenance. Brighteners should not be used for maintenance, otherwise the false coating will fall off. Flat patent leather, wrinkled patent leather:…
Shoeshine towel (also called shoe shine paper):aspecial kind of paper that does not require shoe polish and shoe brushes. It shines on all kinds of leather shoes and leather garments (it does not need to be repeated as with shoe polish shoe brushes to shine), and the effect is better than Use shoe polish to make it brighter, brighter and longer-lasting, non-dusty, and protect leather, hygienic and nontoxic Shoe shiners are divided into domestic oily shiners and water-based shiners 1. Water-based shoe towels are generally made of simple chemical raw materials such as non-woven fabric, ရေ, resin, etc.! For water-based shoe towels, manufacturers in this industry in China mostly use resin-based water-based shoe-shine liquid. It was just bright…
သားရေဖိနပ်များကိုအရောင်တင်ရန်နှင့်သားရေဖိနပ်၏သက်တမ်းကိုကြာရှည်ရန်အတွက်, many people will put shoe polish on the shoes from time to time, စောင့်ရှောက်မှု, နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု. ဒီတော့, ဖိနပ်အရောင်အသွေးစုံလင်သောဖော်မြူလာ၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကဘာလဲ? ဖိနပ်အရောင်အမျိုးအစားများကဘာတွေလဲ? အရည်ဖိနပ်အပို (သို့) ဖိနပ်အစိုင်အခဲကောင်းသည်? ဖိနပ်အရောင်အသုံးပြုနည်း? ဘယ်လိုဖိနပ်အရောင်ကောင်းလဲ? ဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ? နောက်တစ်ခု, let's understand the encyclopedia of shoe polish. ဖိနပ်ပုံသေနည်းပါဝင်ပစ္စည်းများ 1. emulsified ငါးပိထုတ်ကုန်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုဖယောင်းကုန်ကြမ်းဖြစ်ကြသည်, အရည်ပျော်, ရေ, emulsifiers, ခြယ်ပစ္စည်း, ဆိုးဆေး, အခြားအပိုဆောင်း, သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းများ. 2. solvent-based ငါးပိထုတ်ကုန်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာဖယောင်းကုန်ကြမ်းများဖြစ်သည်, အရည်ပျော်, ခြယ်ပစ္စည်း, အခြားအပိုဆောင်း,…